Galmeen cufamus, Gammachuun fa’aa amallee hidhaa jiru’-Abukaatoo | OROMOTV
Koloneel Gammachuu Ayyaanaafi namootni biroon galmee isaanii jala jiran ”ammallee manuma hidhaa keessa jiruu” jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa.
Guyyaa har’a dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaatee kan ture hooggannoonni Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa’aa hiikamaniiru oduun jedhu miidiyaa hawaasaarra naanna’aa ture.
Abokaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa BBC’f bilbilaan yaada kennaniin, dhimma Koloneel Gammachuu fa’a irratti Manni Murtii Federaalaa har’a dhaddacha ooleen ”eenyu akka isaan hidhe hin beekamu jechuudhaan galmee isaanii cufeera” jedhan.
Hidhamtoonni kunneen hiikamaniiru jechuun oduun miidiyaa hawaasaarra naanna’aa jiru ”kijiba” kan jedhan obbo Tuuliin, mana hidhaa dhaqanii Koloneel Gammachuu arguu dubbataniiru.
Manni Murtii osoo maamiloonni isaanii hidhaa hin hiikamiin galmee cufuun sirrii mitis jedhan.
Qondaalota ABO mana hidhaatii dhabaman ‘lubbuu isaaniitiif yaaddofne’ jedhu maatiin
Kol. Gammachuu Ayyaanaafaa beellama mana murtiitti osoo hin dhiheeffamin hafan
Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoonni 12 bilisaan akka gadhiifaman murtaa’e
”Manni murtii galmee cufuun dogoggora. Nu akka keenyatti hin fudhannu. Nu hin gammachiifne. Silaa warra seeraan ala isaan hidherratti tarkaanfii fudhachuu qabu, beenyaan kaffalamuu qaba, gallakkifamuus qabu.”
Manni murtii dhaddacha har’aa kana irratti Abbaan Alangaa manni murtii erga akka gallakkifaman murteessee hidhaa turuu isaaniirratti qorannoo akka godhu murteessuu himanii, kunis adeemsa sirrii miti jedhan.
Warri hidhaa jiran seeraa ala hidhamne nuuf haa qulqullaa’u osoo jedhanii Manni murtii dhimmicha qulqulleessuun osoo irra jiruu Abbaa Alangaa isaa ofii hidhee ani hin beeku jedhuun qoradhu jechuun nuuf hin galuu jedhan.
Abokaatoon hidhamtoota kanaa guyyoota dhufan hidhamtoota hooggana ABO biroo koloneel Gammachuu waliin haala walfakkaataa keessa jiran waliin mariyachuun waan gochuu danda’an irratti akka mariyatanis dubbatan.
Manni Murtii galmee kana yoggaa cufu ”qaamni hidhe hin beekamu” jechuun isaa waan namaa hin liqimfamneedhaa jedhu obbo Tuuliin.
”Maamiltootni keenya eegdota jaarmiyaa qorannoo yakkaa federaalaan dhiyaachaa osoo jiranii mootummaatu hidhe jechuu hin dandeenyu kan jedhu namaa hin liqimfamu.”
”Poolisiin Federaalaa Poolisii Oromiyaatu hadaraan nu bira kaahe jechaa quba walitti qabuutu jira. namni akka qodaatti adaraan kaahamuunis seera keessa hin jiru” jedhan.
Galmeen erga cufamee hireen hidhamtootaa maal ta’a jennaan ”nuti hin beeknu” jedhanii jechuun haalichi rakkisaa ta’uus himan.
Obbo Tuuliin oogummaa seeraa kana keessatti muuxannoo waggaa 20 qaban keessatti ”osoo himatamaan hidhaa hin bahiin galmeen yeroo cufamu takkaa argee hin beeku” jedhan.
Hoogganoonni ABO akka koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa, fi kaanis erga Mana Murtiin bilisa jedhamanii ji’ootni lakkaawamus, hanga ammaa sababoota ifa hin taaneen osoo hin gadhiifamiin jiru.
Load More (6/121)